ပြီးခဲ့တဲ့ပို့စ်က ပီကျှူးပဟေဠိကို Sint Si က မှန်အောင် ဖြေသွားပါတယ်ရှင်း)
(ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း-လက်ခုပ်သံများ)
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီအကောင်က ပီကျှူးအမပါ။ သူ့လက်အောက်မှာ ပီကျှူး အကောင်သေးလေး ဘေဘီ ပီကျှူးလေး နဲ့ ကစားနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဟော ပီကျှူးအထီးကျတော့ လက်ထဲမှာ ဘောလုံးကလေးလို အလုံးကလေးနဲ့ ကစားနေတာ တွေ့ရတယ်ရှင့်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောပွဲကမှ ၁၉၃၀မှာ ပထမဆုံးပွဲရှိသေးတာ။ သူတို့က ပိုတောင်စောပုံရသေးတယ်း)
ဒီမှာ ကြည့်ပါဦး။ ပီကျှူး အထီးနဲ့ အမ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ကြပါ။
ပီကျှူးတွေရဲ့ လက်အနေအထား မူကွဲတွေ အမျိုးမျိုးရှိနေပြီး အဓိပ္ပါယ်လည်း ကွဲပြားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထားပါတော့လေ။ အဲဒါက စကားအဖြစ် ပြောပြရုံပါ။
Tiananmen Square ကပြန်အထွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ မူလအစီအစဉ်က နေ့လည်စာ သွားစားခဲ့ကြတာပါ။ ဒီမှာတော့ ဒါကို ကျော်ချလိုက်ပါမယ်။
(ပရိသတ်ကြီးမှ အားမလို အားမရသံများ...)
(စီကေအေမှ မကြားချင်ယောင်ဆောင်၍ ပြောချင်တာ ဆက်ပြော....)
ကျွန်မတို့ နောက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့နေရာကိုလည်း ကျော်လိုက်ပါဦးမယ်။ တိုးဂိုက်ပဲကေ လိုက်ပို့ခဲ့တဲ့နေရာက လဘက်ခြောက်အရောင်းဆိုင်ပါ။ အဲဒီမှာ သူတို့ ဖျော်တိုက်တဲ့ တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက်သော ရေနွေးကြမ်းတွေ ကို သောက်ပြီး သူတို့ပြောသမျှနားထောင်ဖို့ပဲလို့ စဉ်းစားထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အားနာတတ်တဲ့ ကျွန်မက စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀ကျော်တန်တဲ့ လက်ဘက်ခြောက်တုံးကြီး တစ်တုံးနဲ့ ဘူးအသေးလေးတစ်ဘူးကို မနေနိူင်မထိုင်နိူင် ၀ယ်လာမိပါသေးတယ် (အတန်တန် စိတ်တင်းထားတဲ့ကြားက...ဟင်းးး)။ ကြုံရင် ဓါတ်ပုံ တင်ပေးပါဦးမယ်။ ဘ၀တစ်သက်မှာ ဈေးအကြီးဆုံးသော ရေနွေးကြမ်း သောက်ဖူးသွားတာပေါ့ရှင်။
ကျွန်မတို့ သွားခဲ့တဲ့ နောက်တစ်နေရာက Temple of Heaven ပါ။
Temple of Heaven-ကောင်းကင်ဘုံဘုရားကျောင်းလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။ ၀င်ကြေးက တစ်ယောက်ကို ယွမ် ၃၀ပါ။
သူ့ကို မင်း(Ming)-မျိုးဆက်(၁၃၆၈-၁၆၄၄)တွေ နန်းစံတဲ့ကာလ ၁၄၂၀ခုနှစ်တုန်းဆီက တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ချင်း(Qing)-မျိုးဆက် (၁၆၄၄-၁၉၁၁)မှာ တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
အဲဒီ နှစ်ဆက်သော မင်းဆက်တွေ က သူတို့ဟာ ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့ သားတော်တွေဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် (သူတို့ဟာ အမြဲတမ်း အဲလိုချည်းပဲ ထင်တတ်ကြတာပဲ) ဆန်ရေစပါး ပေါများ ပါစေကြောင်း၊ ရေမိုးမှန်ပါစေဖို့ အကြောင်း၊ ပြည်သူတွေ ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အကြောင်းတွေ သွားရောက် ရှိခိုး ဆုတောင်းရာ နေရာဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ပုံလှလှလေးတွေ ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ သွားကြည့်နိူင်ပါတယ်နော်။
မောင်သီဟ Wed Feb 29, 11:17:00 PM GMT+8
TZA Wed Feb 29, 11:18:00 PM GMT+8
ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့ သားတော်တွေဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် (သူတို့ဟာ အမြဲတမ်း အဲလိုချည်းပဲ ထင်တတ်ကြတာပဲ)..
ဟားဟား.. မှန်လိုက်လေဗျာ.. :D
Zoe Thu Mar 01, 04:55:00 AM GMT+8
သူတို့ တိုက်တဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ရည်ထဲမှာတစ်ခုခုပါတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ၀ယ်ပြီး အိမ်ကြရင် အဲတုံးက အဲပစ္စည်းကိုအဲလောက်ပေးပြီး ဘာလို့ ဝယ်တာလဲလို့ စဉ်းစားလို့ မရတော့ပါ။
ပန်းချီ Thu Mar 01, 08:39:00 AM GMT+8
ပေးထားတဲ့လင့်ခ်မှာသွားကြည့်တော့ အတော်လေးအနုစိပ်ပြီးလှတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံဘုရားကျောင်း ရဲ့ဗိသုကာလက်ရာတွေကို တွေ့ရတယ် မကြီးရေ။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားချိန်ကလည်း စောတယ်လို့ပြောရမယ်။
Vista Thu Mar 01, 11:30:00 AM GMT+8
ကျေးဇူးအထူးပါ မချစ် .
ကျနော်က တရုတ်ပြည်ကိုတော့ သွားမလည်ချင်ဘူး ဘာလို့ လည်းတော့မသိဘူး။
မချစ်ဆီမှာပဲ သိချင်တာတွေ ဖတ်လိုက်တော့မယ် ပုံတွေကြည့်လိုက်တော့မယ် ။ ကိုယ်တိုင်သွားတောင်အဲလို သိလာမယ်မထင်ဘူး ဟိ။
အမ်တီအန် Thu Mar 01, 12:20:00 PM GMT+8
ရအောင်တင်ပေးနေတာ သိ၏။ သို့သော်...
ဆန့်တငံ့ငံ့နဲ့.. ဖတ်ရတာ အားမရဘူးရယ်...။ ဆက်ရန်ကို ဆက်လက် မျှော်နေပါ့မယ်နော်...။
မဒမ်ကိုး Thu Mar 01, 12:46:00 PM GMT+8
လက်ဘက်ခြောက် ၁၀၀ တန်ကိုပြပါဦး မမချစ်ရေ
**~ မြတ်ကြည်~** Thu Mar 01, 01:22:00 PM GMT+8
အထီးအမတော့ခွဲတတ်သွားပြီ။ နောက်ဆို ဆင်ဆာမဖြတ်ကြေး။
ဖြိုးဇာနည် Thu Mar 01, 06:09:00 PM GMT+8
ဟဟ အကုန်မသွားပီနော် ။။။ခွင့်ပြုပေးပါ
လို့ /////ယူပြီးမှခွင့်တောင်းတာ :P
Sint Si Fri Mar 02, 12:32:00 PM GMT+8
I had the most expensive cup of tea (U$30/cup) at one of the hotel in Beijing as well.It was so tasty though.
San Htun Fri Mar 02, 12:52:00 PM GMT+8
ပီကျှူး အထီး၊ အမ ခွဲတတ်သွားပြီ..၁၀၀ကျော်တန် လက်ဖက်ခြောက်ကို ပြပါဗျို့ ..မြင်ဖူးချင်လို့ ..ကောင်းကင်ဘုံဘုရားကျောင်းကြီး လှတယ်..မြန်မြန် ဆက်ပါဗျို့ 
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Mar 02, 05:54:00 PM GMT+8
အစ်မတို့များ ဓာတ်ပုံတောင် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဘာတွေနဲ့း))
Google က ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပေးရရှာတယ် ဟိဟိ
လက်ဆောင်ပေးနော် နော်..း)
မီးမီးငယ် Sat Dec 30, 01:51:00 AM GMT+8